ChurchAges.net - Zvidzidzo zveBhaibheri
Gwara rakakosha kuzivisa chokwadi. Vapostora vakanyora Testamente Itsva, maprofita akanyora Testamente Yekare. Isu tinoda vadzidzisi vanokwanisa kusona kubatanidza Testamente yekare neTestamente Itsva pamwechete kuti chokwadi chiziviswe kuzuva redu nhasi.
Micherechedzo iyi inorevei, uye chii chatingadzidze kubva pairi muhupenyu hwedu?
1 Timotio 3 – Mabhishopu nemaDhikoni
Mukuru munhu aneruzivo rweBhaibheri uye izwi rekuti Bhishopu ringori basa remunhu iyeye.
Antikristu akakura nekubudirira sei pamakore 800 ekutanga
Kutadza kuri kurarama uye kwakasimba panyika
DNA inotonga hupenyu hwenyama nekuti ndiyo mutauro wehupenyu hwenyama. Bhaibheri ndiro mutauro wehupenyu husingaperi saka nekudaro rinofanira kutonga hupenyu hwedu pamweya.
Bhaibheri, chitendero chevachena, chakazivisa hunhapwa kuAfrica here? Kwete, kwete chero nepaduku pese
Muti unoshandiswa semucherechedzo muBhaibheri rese. Kunzwisisa zvinoreva mucherechedzo uyu kunotibatsira kunzwisisa kuti Mwari anoshanda sei nezano rake mukati mehupenyu hwedu.
Ndiyani akati zvakaropafadzwa zvikuru kupa kukunda kugamuchira?
Genesisi 1 - Kuwana ruzivo rwekuti zvese zvakakanganisika sei
Genesisi 2 - Kuwana ruzivo rwekuti zvese zvakakanganisika sei
Genesisi 3 - Kuwana ruzivo rwekuti zvese zvakakanganisika sei
Chii chatinonyatsoziva pamusoro pekutinhira kunomwe? Hapana zvizhinji
Vanhu vangazive sei zvakawanda pamusoro pezvinhu zvisina kana kunyorwa nezvazvo?
Mwari akaisira zvakaipa muganhu, zvinoratidzwa nejecha remahombekombe egungwa, uye anoshandisa zvinhu zvinokonzereswa nechakaipa kuzadzisa hurongwa Hwake.
Chirayiro Chikamu 1
Chirayiro Chikamu 2
Chirayiro Chikamu 3
Danieri 12:10 – 13 - Vakachenjera vega ndivo vanonzwisisa
Mavara manomwe ari pamurarabungu anobatana kuita chiedza chichena. Tinocheneswa chete kana mwari azadzisa Zano rake kunguva nomwe dzemakereke.
Danieri 9:24-27 MaJuda vane nemakore 490 chete
Makore evaHedeni 483. Jesu ndiye aive nemakore manomwe ekupedzisira. Akavurawa mumashure memakore matatu nehafu. MaJuda achiri kukweretwa makore matatu nehafu naMwari.
Danieri 9:27 – Sungano yakasimbiswa kwete kuitwa
Sungano yakasimbiswa haigoni kuputswa. Kristu akasimbisa sungano yakaitwa naMwari kuna Abrama.
Danieri Chitsauko 8:1-12 Gondobwe neNhongo
Danieri Chitsauko 8:13-27 Kubva panaIsaka kusvika panaJesu. Nekusimuka kweChikara
Dombo ReMusoro Wekona Harisati Rauya
Vazhinji vanoti Gore rakaonekwa muna 1963 kwaive kuuya kweDombo reMusoro wekona sekunge ndiko kwaive kudzoka kwaJesu.
Gabrieri akaudza Danieri remangwana reIsraeri
Achidzokera kumaJuda munguva yeKutambudzika, Jesu anobvisa zvivi zvakazara, odzosera maJuda kwaari.
Kuramba tsananguro yekuti chivi chekutanga chaive kudya muchero unotemhwa mumuti
Chii chatingadzidze pazvinhu zvenyama uye zvinhu zvemweya kubva pamazuva mana ekutanga, sekutsanangurwa kwazvakaita kuna Genesisi 1?
Gore rakaonekwa muna 1963 haringaiti Mutumwa wekuna Zvakazarurwa 10
Vatumwa vanomwe vachienda vari kumusoro kudenga vakaumba musoro havangavi mutumwa mumwechete achiuya nemakumbo maviri ...
Kana mhiko yewanano iri pamurairo, hakuna chinhu chinonzi kurambana chinokwanisa kuiparadza, nekuti mhiko iyi inoti “Kusvika maparadzaniswa nerufu”.
Hama Branham havana kubvira vataura kuti “Izvozvi rangarirai kuti mutumwa wechinomwe ari panyika panguva yekuuya kweMutumwa mukuru” Kuturikirwa kwezvakataurwa KWENHEMA
Nhau dzenhema dzinotaurwa sechokwadi vanhu vodzibvuma zviri nyore kana vasina kutsvaga mudzi wadzo.
Jesu akagurirwa panzira pakati pevhiki, mumashure mehushumiri hwemakore matatu nehafu.
Hutungamimiri hwevanhu whakatsiva sei Kristu semusoro wekereke.
Vafundisi vanowanzotonga mumakereke avo nemazwi avakabata pakutaura kwevamwe vatauri. Ichokwadi here ichi?
Mambo Sauro ndiye mufananidzo wehutungamiri hwevanhu mukereke uye Mwari akahuvenga.
Mwari anoshandisa Israeri sechiringazuva chekumisa kana kutanga kufambisa nguva. Haaiti izvi kwatiri maHedeni (marudzi asiri maJuda).
Jesu akati, “Chenjerai kuti murege kutsauswa nomunhu”. Kutenda kwenguva Itsva.
Hakuna Magwaro anoti Wakakwegura anogara kare nakare nokusingaperi ndiMwari Baba.
Jesu pamahombekombe erwizi. Mweya Mutsvene unoburuka. Mwari Baba vanotaura kubva kuDenga. Angava sei Mwari mumwechete?
Jesu, Gwaiana rePaseka, akafa musi weChina – kwete musi weChishanu
JOBO 33:23-26 Tinoda nhume, mushanduri kuti atirwire kubva kugomba
Mutungamiri wechiJuda akazivisa mutambo wemuTemberi waive usina chekuita neMurairo weTestamente Yekare. Izvi zvakaratidza kuti vatungamiri vaizoita zvakadii dzidziso dzisimo muMagwaro kuti vatungamirire vanhu kubva paShoko rechokwadi, kuti vasatevere Jesu pachokwadi.
Mwari anogara muShoko rake. Kana akawana varume nevakadzi vanoteerera Magwaro ipapo anogara mumoyo yavo kuti azadzise zvinoziviswa neBhaibheri kunguva yavo kana chidanho chekereke yechokwadi.
Zviitiko munyika yedu yatigere micherechedzo yechokwadi chemweya chakadzama chiri kuziviswa.
Davidi ega ndiye akagona kukunda Goriati. Jesu ega ndiye anogona kukunda rufu, chivi, neguva.
Jesu akafamba muSamaria. Ikoko akaratidza kukoshesa kwake nguva dzemakereke dzaizouya.
Vatendi vakatapwa mumakereke avo nekuda kwekutya vatungamiri vezvitendero zvavo. Vanoramba Shoko raMwari kuti vagare vakachengetedzeka mumakereke avo.
Vatungamiri veRoma vakaunza rufu. Jesu ndiye Chingwa cheHupenyu zvinomuita kuti ave iye ega Tsime reHupenyu Husingagumi.
Johane Chitsauko 07. Mvura yeHupenyu kubva paMuchinjikwa
Vatungamiri vezvitendero vakaedza kutapa Jesu neMurairo waMosesi. Kuedza kwavo kwakabva kwazivisa kutadza kwaMosesi, uye kukundikana kukuru kweMurairo pakushandura vanhu kuti vave vakanaka uye vari nani pahunhu hwavo.
Vatungamiri vezvitendero zvechiJuda vaida kuuraya Jesu nekuti aive chipingaidzo kuchimiro chechitendero chavo. Vakasarudza mari nekukudzwa kwetsika dzezvitendero zvavo dzakaitwa nevanhu pachinzvimbo chaMessiasi wavo.
VaFarise vakashingirira kuti varambe vachitungamirira maJuda, asi vaive mapofu aisaona chiedza chechokwadi chaJesu. Murume aive bofu akasvinudzwa meso ake naJesu, akaona kuti Jesu aive ani.
Jesu akataura kuti Johane Mubapatidzi aive Eria. Johane akati aive asiri. Tingayananise sei kutaura uku kwese?
Tsika yeKisimusi yakabva kupi?
Kuda kwevanhu kwakatapwa munguva nekuda kwezvivi
Nguva chinhu chinoti netsei kunzwisisa. Kuda kwevanhu ndiko “muono muduku” unorasika. Bhaibheri ndiko kuda kwaMwari kunoona “Muono Mukuru” unoona zviri mberi neshure.
Kugadzirisa nyaya yePaseka nemakore matatu nehafu ehushumiri
Evhangeri harizvirwisi asi tinofanira kuturikira zvarinotaura zvakanaka nekuti zvakaoma kwazvo kuzivisa chakavanzika.
Kukanganisa kwakaitwa Mumharidzo “Vhiki raDanieri Rechimakumi Manomwe”. Ndapota ongororai Zvakataurwa zvakanaka.
Kukura kweMunhu Wakarurama
Kune kumwe kududzirwa here kweNguva, Dzimwe Nguva, neHafu yeNguva? Zvinongoreva kuti makore matatu nehafu chete here?
Kurwa pakati pemaArabu nevaIsraeri
Chidzidzo chipfupi chenhorondo.
Kushambidza tsoka kunotizivisa muono wakadzama munhorondo yekereke uye chinzvimbo chedu chatiri munguva yekereke yechinomwe.
Kuronga kereke makanangana naWilliam Branham nehukuru hwehushumiri hwake zvinoreva kunyengerwa kwekereke nemweya waantikristu. Kukosha kunofanira kuiswa panaIshe Jesu Kristu neShoko rake.
Hatigoni kufamba muMweya kunze kwekunge tichiziva ndangariro dzaKristu. Tinowana ruzivo urwu kubva muMagwaro.
Tinofanira kugadzirira Kuuya kwaJesu Kristu kweChipiri kupfurikidza kukwanisa kumuona achiratidzwa muShoko rake, tisati tamuona achionekwa seShoko.
Tinofanira kuziva kuti Mwari ndiyani.
Ruremekedzo runopihwa Larkin nekuda kwedzidzo yake rwakabatsira kusimbisa pfungwa yakapararira yekuti nguva yeKutambudzika ichave makore manomwe, asi hakuna Magwaro anotsigira izvi.
Makore 400 Mwari akanyarara mumashure meMuprofita Maraki
Makore 400 inguva refu zvakaita kuti Diaborosi agadze chimisikidzo chake chikuru, kereke yeRoman Catholic.
MaKristu akaponeswa ese anokwira Kudenga panouya Ishe mukubwaira kweziso here (Repucha)?
Marko Chitsauko 1:1-12 – Muranda akazvideredza
Jesu ndiye Muranda mukuru, Nzombe ine simba kwazvo. Mutakuri wemitoro yedu Iyo, sembudzi yekurasirira, akatakura zvivi zvedu kuenda nazvo kure.
Marko chitsauko 1:13 – 45 Kushingirira kwake asinganeti
Muranda ane chido chikuru kwazvo nemabasa asina muganhu anodawo nguva murenje ari oga naMwari, kure neruzhinji.
Mweya waMwari unoratidzwa muzvipenyu zvina zvinorarama, chimwe nechimwe chichimiririra hunhu hweMweya waMwari waanoshandisa kutungamira kereke muzvikamu zvina zvakasiyana.
Ichi chidzidzo “chebasa retsvagurudzo” rakanakisa kuti tiwane mazera emadzitateguru, semuenzaniso Adamu, Noa kana Abrahama.
Mereniyamu Chikamu 1 - Nhanganyaya, Mwenga
Nhanganyaya. Mwenga, Antikristu neKereke.
Mereniyamu chikamu 2 – Nhanganyaya, MaJuda
Mereniyamu Chikamu 3 – Tichadamuviri wakadii kuti tigareko?
Mereniyamu Chikamu 4: Chiratidzo chaEzekieri
Tinodzidzei kubva pachikafu chaidyiwa naJohane mubapatidzi? Mhashu nehuchi hwebundo zvinomborevei?
Mhuka dzakaitwa Adamu aitwa kare here?
Genesisi 2:18 JEHOVA Mwari akatizve, "Ha­zvina kunaka kuti munhu agare ari woga; Genesisi 2:19 JEHOVA Mwari akaumba nevhu mhuka dzose dzesango
Mibvunzo pamusoro penhau dzeBhaibheri Chikamu 1
Yambiro yeCovid-19. Zita raMwari. Vakadzi vachizvideredza kuvarume vavo. Mangoma muchechi. Petro ari Pope. Bvudzi rakarukwa. Kuchecheudzwa kwemoyo. Vakadzi vanoparidza.
Mibvunzo pamusoro penhau dzemuBhaibheri Chikamu 2
Vanakomana vaMwari vachindomira pamberi Pake. Mapasita nemabhishopu. Vachidzoka pazvivi. Vachivimba nemoyo yavo. Zvakanyorwa munyika. Kuti Satani chii
Mibvunzo panhau dzeBhaibheri Chikamu 3
Vaparidzi vakapfuma. Tinotongesa Mwari. Barika. Pasita ndiye musoro wekereke. Mwari anotendeuka. Biden Chiratidzo chenguva. Mvura pamusoro pevanhu.
Mibvunzo panhau dzeBhaibheri Chikamu 4
Satani haana kuita bonde naEva. Muti wekisimisi wakaipa. Chidzidzo chikuru kubva kuna Samusoni. Mwari naJesu. Bhaibheri reKing James Rakarurama.
Mibvunzo panhau dzeBhaibheri Chikamu 5
Gwaiana rakatora Bhuku zvinoita sekuti vanhu vaviri. Shabati raGirigori. Nzira yeMuti weHupenyu. Mvura yekupedzisira. Hupenyu hwangu hunoita sehusingashanduki.
Mibvunzo yeBhaibheri iri kufuratirwa nemakereke, Chikamu 1
Testamente yekare inowana chirevo chakadzama kubva muTestamente Itsva. Bhaibheri rese nderechokwadi. Harizvirwisi.
Mibvunzo yemuBhaibheri iri kufuratirwa nemakereke. Chikamu 2
Mabhuku mana eEvangeri haarwisane sezvo achitsanangura Kristu kubva pakuonekwa kwake ari Mambo, Muranda, Munhu, uye Mwari.
Erisha aive mucherechedzo wehushumiri huviri hune simba hwaizouya. Hwekutanga hwaizoonekwa munguva yekereke yekupedzisira kukereke yevaHedeni uye hwechipiri hwaizoonekwa munguva yeKutambudzika kukuru kumaJuda 144 000.
MuBhaibheri hamuna muHedheni ‘anotsiva’ William Branham
Muchero wakarambidzwa – Zvinonyatsorevei?
Nei tese takaberekerwa muzvivi? Ndeipi yaive imwe nzira yekuzadza nayo nyika nehupenyu husingagumi?
Mufundisi ndiye Musoro wekereke here?
Mune zviitiko zvitatu zvakasiyana zvemukadzi anozodza Jesu muEvangeri. Musiyano wazvo unorevei?
Mumashure memazuva 2300 Nzvimbo Tsvene Ichanatswa
Muonde mucherechedzo unoshandiswa neBhaibheri kutsanangura Israeri
Miyenzaniso yakati kuti inoratidza kuti Ishe vanoshandisa muonde kumiririra Israeri.
Mwari ega ndiye akarurama. Kana muchida kuti maprofita ave asina zvipomerwa zvachose, makabviswa kubva kuchokwadi cheMagwaro. Uye hapana musiyano kuti maprofita “makuru” here kana kuti “maduku”.
Chivi chakaparadza Paradhiso yaMwari. Saka Mwari akavenga chivi. Mwari anoda mutadzi akatendeuka asi kutonga kwekutsamwa kwaMwari kunodiwa kuti kunatse nyika isina kutendeuka.
Muviri, Moyo neMweya -- Izvi zvinorevei?
Muviri wenyu wenyama unoyanana nenyika yedu yatigere yezvinhu zvinobatika nekuonekwa. Mweya wenyu wowadzana nenzvimbo dzemweya dzepamusoro. Asi mukati mazvo zvese mune mweya wemukati kana moyo – nzvimbo yedzoreredzo, mukati memukati. Mweya wemukati kana moyo unotonga mweya, mweya wotonga muviri.
Bhaibheri rinoti makereke ese munguva yeRaodikia mapofu, asi haazvizivi. Saka tinowana sei chinhu chikuru chatinofanira kunangana nacho? Kugara nezvakanyorwa muBhaibheri.
Mwari aive kupi Jesu paakamudaidza ari pamuchinjikwa achiti, ‘Mwari wangu, Mwari wangu mandisiireiko?’
Chakavanzika chekunamata chikuru kwazvo, Mwari wakaratidzwa pamuviri.
Mwari neimwe nzira akabatanidza mweya unoshamisa nehunhu hwemunhu.
Mwari Baba havaonekwi uye havana mufananidzo. Saka vakararama mukati meMunhu akarurama Jesu, Mwanakomana waMwari, kuti tione kuti Mwari aizova akaita sei dai aive munhu.
Mwenga anomirira Kutinhira kunomwe
Kutinhira kuchatipa Kutenda kwekukwira kudenga. Asi hatigoni kutorwa kukwira kudenga tisina miviri mitsva saka tomirira Kutinhira kunomwe kuti kusvike.
Murairo wakakundikana kuita kuti maJuda vaite vanhu vari nani. Saka Jesu ainongedzera nzira yekuenderera mberi nayo. Inobva paGorogota nzvimbo yemarangwanda.
Kune zvinhu zviduku-duku zvakawanda zvakataurwa nekuitwa naJesu zvatinotarisira pasi tichiti hazvina kukosha. Kereke yeRaodikia ibofu, asi haizivi kuti ibofu.
Konia akagumisa hushe hwerudzi rwaSoromoni. Maria aive werudzi rwaDavidi Mwanakomana wake Jesu akava mwana waJosefa wekurera. Saka Jesu akadarika kutukwa kwaKonia nevakabva paari.
Apa kukosha kuri pavanhu vashoma. Vasina kukosha zvachose kuti vaonekwe kana kuzivikanwa. Asi vanonzwisisa mavhesi maduku ari muBhaibheri anofuratirwa nemakereke, anotarisirwa pasi, uye anorwiswa nekuti vemumakereke havagoni kumanzwisisa.
Pachinzvimbo chekutarisa kuti nei Trump akakunda musarudzo dzemutungamiri weAmerica nezvikonzero zvedu zvenyama, ngatitarisei kuti tingadzidzei munezvemweya.
Nguva dzakatanga rini? Nguva dzinoguma rini?
Efeso inomoririra nguva yekereke yekutanga yaive yakanakisa padzese, yakatangwa nemapostora – kereke yeTestamente Itsva yatinofanira kudzokera kwairi tese.
Nguva dzemakereke - Pergamosi, Nguva yeChitatu, 312 AD - 606 AD
Nguva dzemaKereke - Tiatira, Nguva yeChina 606 -1520AD
Nguva dzemakereke – Sardisi, Nguva yeChishanu 1520 AD - 1750 AD
Nguva dzeMakereke – Smirna, Nguva yeChipiri, 170 AD – 312 AD
Nguva dzeMakereke – Zvakazarurwa Chitsauko 1 – Kereke yakatopfuura Nguva Nomwe dzeMakereke here?
Wanano inofanira kutevera nzira yakaitwa naMwari pakutanga mumunda weEdeni.
Zvakakosha kwazvo kunzwisisa Bhuku iri zvakanaka kana muchida kuzviwanira ruzivo rweChokwadi. Satani akavenga Bhuku raZvakazarurwa nekuti rinozivisa zvakaipa zvakawandisa zvaakagona kuisa mukereke.
Rubhapatidzo chiratidzo chekufa, kuvigwa nekumuka kuvakafa.
“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano -- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita
“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu” -- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii? Ruka anotidzidzisa zvidzidzo zvakakosha kuti torarama sei pamazuva edu ano-- Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita
Ruka, chikamu 1 -- Chitsauko 1-5
“Chisikwa chipenyu chechitatu chaive nechiso sechemunhu”.
Ruka, chikamu 2 -- Chitsauko 6-12
Tichienderera mberi nechidzidzo chaRuka. Tinodzidza zvidzidzo zvakakosha kuti tinofanira kurarama sei mumazuva ano.. Tichitevera Magwaro pazvinhu zvese zvatinoita.
Ruka, chikamu 3 -- Chitsauko 13-19
Chikamu chechitatu muEvangeri raRuka- Isu sevanhu tinofanira kuita hunhu hwakadii?
Sabata mucherechedzo wekunze wezororo repavhiki here, kana kuti mucherechedzo wemukati werubapatidzo rweMweya Mutsvene runotiita kuti tizorore kubva kumabasa edu ezvivi uye ekusatenda?
Tembere ichavakwazve here munguva yeKutambudzika kukuru? Chikamu 1
Tembere ichavakwazve here munguva yeKutambudzika kukuru? Chikamu 2
Tembere ichavakwazve here munguva yeKutambudzika kukuru? Zvinogona kudaro. Asi hakuna vhesi reBhaibheri rinoprofita izvi.
Tinoziva zvakavanzika zvese here? Chikamu 1: Zvakavanzika 11 zvisina kubvira zvataurwa nehama Branham kuti vanoziva nezvazvo.
Tinoziva zvakavanzika zvese here? Chikamu 2: Zvimwe Zvakavanzika 6 zvisina kubvira zvataurwa nehama Branham kuti vanoziva.
Tiriniti inopatsanura Mwari kumuita Vanhu vatatu zvosika matambudziko mazhinji akaita serekuti Zita raMwari nderekuti kudii.
Kereke yekutanga yakaparadzirwa kuita mapoka maduku maduku nekuda kwekuuraiwa kwevatendi. Boka repanzvimbo pega pega raitungamirirwa nevatariri vepanzvimbo kana vakuru. Kwaive kusina hudzvanyiriri hwemunhu mumwechete pamusoro pekereke.
VAHEBERU 1:1 kuti Nguva dzakare Zvinorevei?
Evangeri rinorambwa nemaJuda roenda kuvaHedeni. Kereke yevaHedeni inopatsanurwa kuita Mwenga waKristu uye kereke yakaponeswa inopinda munguva yeKutambudzika, inozivikanwa nekunzi vasikana mapenzi kana vakapusa. Pamagumo enguva dzemakereke, Evangeri rinodzokera kumaJuda.
Musoro wenyaya unotangira kuna Genesisi. Mwari akabva ashandisa nzira imwechete iyi inodzokororwa munzvimbo dzakasiyana-siyana muBhaibheri, kusvikira yatambanudzwa nekuzadziswa kunaZvakazarurwa.
Vhakisini rehutachiwana HARISI Chiratidzo chechikara
Kana mukasatora chiratidzo chechikara munourayiwa. Hakuna munhu akaramba kubaiwa vhakisini akambouraiwa neumwe munhu
Mhiko dzewanano isungano dzikoshesei.
Willam Branham ndiye here Muprofita weNguva yeKupedzisira kuvaHedheni?
Mweya waantikristu unoda kwazvo kusimudzira munhu anoshandiswa nemweya kusvikira munhu iyeye atanga kudaidzwa kuti Mwari.
Zvakaprofitwa naDanieri naJohane mushandirapamwe
Danieri akaronda mweya waantikristu wemuBabironi muTestamente Yekare. Johane akarondawo akabata muzvezve wawo muTestamente Itsva.
Jesu aive nemabasa maviri akakosha ekuita – Musiki neMudzikinuri. Zvinogoneka sei kuti munhu mumwechete aite izvi zvose zviri zviviri?
Zvakazarurwa 7 – Kubuda Munguva yeKutambudzika, maJuda 144,000 neVasikana mapenzi
Chidzidzo chakadzama muna Zvakazarurwa 17
Zvatakatemerwa uye Zvatinoda kuita
Zviitiko zvenguva inouya, zvakaprofitwa muMagwaro, Chikamu 1
Zviitiko zvenguva inouya, Zvakaprofitwa muMagwaro, Chikamu 2
Fananidzai Isaya 40 -66 nemaBhuku ekuTestamente itsva- kunzwisisa kuzara kwehuMwari.
Fananidzai Isaya 40 -66 nemaBhuku ekuTestamente itsva- Nguva dzeMakereke.
Fananidzai Isaya 40 - 66 nemaBhuku ekuTestamente itsva- VaHeberu kusvika kuna Zvakazarurwa.
“Nyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu ngadzive nemwi.” — 1 VaKorinte 16:23